လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ viva အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀ - (၁) - Open Engineering For Myanmar
» လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ viva အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀ - (၁)
လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ viva အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀ - (၁)
လျှပ်စစ် အခြေခံတစ်ချို့တစ်လေကို လူတွေ့မေးတဲ့ အခါ သိရက်နဲ့ မဖြေတတ်တာမျိုး ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီအချက်လေးတွေက မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ အကျိုးများ နိုင်တာကြောင့် ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
မေး-၁။ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် သမားများအတွက် လိုက်နာရန် safety precautions များကို ဖေါ်ပြပါ။
ဖြေ-၁။ 1. ရာဘာ လက်အိတ်များ၊ ရှူးဖိနပ်များ၊ ဖျာများ အသုံးပြုရမည်။ ဤနည်းဖြင့် မြေပြင်နှင့် လူ မထိဘဲ ဓါတ်လိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
2. ဓါတ်အားလိုင်းများ တွင် လုပ်ကိုင်နေသူများ ရှိ၊ မရှိ မသေချာသေးဘဲ မိန်း ခလုတ် ကို မတင်ပါနှင့်။ (သို့) ဓါတ်အားလိုင်းများအား ကိုင်တွယ်၍ အလုပ်လုပ်နေစဉ် မိန်းခလုတ်ကို သေချာစွာ ချထားရမည်။ 3. အလုပ်မစတင်မီ မိမိလုပ်ကိုင်ရမည့် အလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော သီအိုရီ ဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ကြိုတင် စုဆောင်း ပြင်ဆင် ထားရမည်။ မေး-၂။ လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အပေါ် မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက် နိုင်သနည်း။
ဖြေ-၂။ အသက်ရှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ သွေးတိုးနှုန်း ကျဆင်း အားနည်းခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အရည်ကြည်ဖုများထ ခြင်း၊ အဆိုးဆုံးအနေဖြင့် နှလုံးခုန် ရပ်ဆိုင်းခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မေး-၃။ လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက် ခံရသူများကို ပြုလုပ်ပေးရမည့် ရှေးဦးသူနာပြု နည်းလမ်းများကို ဖေါ်ပြပါ။
ဖြေ-၃။ 1. ရှေးဦးစွာ ဓါတ်လိုက်ခံရသူကို လျှပ်စစ်ဓါတ် မလိုက်နိုင်အောင် မိန်းခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်ရမည်။ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓါတ်နှင့် ဝေးရာသို့ မိမိကိုယ်တိုင် ဓါတ်မလိုက်စေရန် သတိထား၍ လူနာကို ဆွဲယူရမည်။ 2. လူနာ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကိန်းအောင်းကျန်နေသေးသော လျှပ်စစ်ဓါတ်များ ကုန်သွားအောင် discharge ပြုလုပ်ပေးရမည်။ 3. လူနာ၏ ဖိနပ်များ၊ အဝတ်များကို ချွတ်ပစ် (သို့) ချောင်အောင် လျော့ပေးရမည်။ ထို့နောက် အအေးမမိစေအောင် နွေးထွေးစွာ ထားရမည်။
4. အကယ်၍ လူနာအနေဖြင့် အသက်ကောင်းစွာ မရှုနိုင်သေးပါက artificial respiration (အသက်ကူ အားရှုနည်း) ပြုလုပ်ပေးရမည်။
မေး-၄။ အရိုးရှင်းဆုံး အသက်ကူ အားရှုနည်း (artificial respiration) ကို ဖေါ်ပြပါ။
ဖြေ-၄။ ပါးစပ်ခြင်း တေ့ပြီး လေမှုတ်သွင်းပေးခြင်း သည် အရိုးရှင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
မေး-၅။ matter ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဖြေ-၅။ နေရာယူနိုင်စွမ်း ရှိပြီး တိကျသော အလေးချိန် တစ်ခုရှိသော မည်သည့် အရာကို မဆို matter ဟု ခေါ်သည်။ ၄င်းကို ပုံစံ ၃ မျိုးဖြင့် တွေ့နိုင်သည် ။ က- အခဲ၊ ခ- အရည်၊ ဂ- အငွေ့ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။